China nkqo umaleko olunye emulsification tank Umenzi kunye noMthengisi | Qiangzhong
I-Tank enye ye-Emulsification Tank
Le tanki ye-emulsification ixhotyiswe ngabaxube abaxubeneyo abathathu, abalungele ukuzinza okuzinzileyo kunye ne-emulsification, kwaye amasuntswana emulsified mancinci kakhulu. Umgangatho we-emulsification ikakhulu ixhomekeke kwindlela amasuntswana asasazeka ngayo kwinqanaba lokulungiselela. Amancinci amasuntswana, buthathaka utyekelo lokudibanisa ngaphezulu, kwaye ngenxa yoko amathuba okuba i-emulsification itshatyalaliswe. Ukuxhomekeka ekuxubeni iincakuba eziguqukayo, ioyile efanayo kunye neemeko zokulungisa
Umsebenzi wetanki ye-emulsification kukunyibilikisa into enye okanye ezingaphezulu (isigaba esomeleleyo sokunyibilika kwamanzi, isigaba solwelo okanye ijeli, njl. Isetyenziswa ngokubanzi kwi-emulsification kunye nokuxutywa kweoyile ezityiwayo, umgubo, iswekile kunye nezinye izinto eziluhlaza kunye nezincedisayo. Ukufakwa emulsification kunye nokusasazeka kwento ethile kunye nepeyinti nako kufuna iitanki zeemulsification. Ilungele ngokukodwa ezinye izongezo ezingafakwanga i-colloidal, ezinje nge-CMC, i-xanthan gum, njl.
Itanki le-emulsification lilungele izithambiso, amayeza, ukutya, i-chemistry, ukudaya, inki yokuprinta kunye namanye amashishini. Isebenza ngakumbi kulungiselelo kunye ne-emulsification yezixhobo ezine-viscosity ephezulu kunye nomxholo oqinileyo ophakamileyo.
(1) Izinto zokuthambisa: iikhrimu, into yokuthambisa, imilebe yomlomo, ishampu, njl.
(2) Amayeza: Amafutha, iisiraphu, amathontsi wamehlo, amayeza okubulala iintsholongwane njl.
(3) Ukutya: ijam, ibhotolo, imajarini, njl.
(4) Iikhemikhali: iikhemikhali, izinto zokubambelela zokwenziwa, njl.
(5) Iimveliso ezinombala: i-pigment, i-titanium oxide, njl.
(6) Ukuprinta i-inki: umbala we-inki, i-inki ye-resin, i-inki yephephandaba, njl.
Abanye: i-pigment, i-waxes, iipeyinti, njl.
Inkxaso yefayile yobuchwephesha: ukubonelela ngezixhobo ezikhethiweyo (CAD), umzobo wofakelo, isatifikethi somgangatho wemveliso, ufakelo kunye nemiyalelo yokusebenza, njl.
itheyibhile engentla yeyokubhekisa kuphela, inokwenza ngokusesikweni ngokweemfuno zabathengi.
esi sixhobo singenza ngokwezifiso ngokwempahla yomthengi, kufuneka sithobele inkqubo, enjengokudibana
viscosity ephezulu, umsebenzi ofanayo womeleza, izinto ezibuthathaka kubushushu ezinje ngeemfuno.
Umgaqo-nkqubo wayo osebenzayo kukuba amandla e-centrifugal aveliswe ngesantya esiphezulu kunye nokujikeleza okunamandla kwentloko emulsifying iphosa umbandela kwisithuba esimxinwa nesichanekileyo phakathi kwe-stator kunye ne-Rotor evela kwicala le-radial. Izinto zokufunda ngaxeshanye ziphantsi kwe-centrifugal extrusion kunye nefuthe lemikhosi ekufuneka isasazwe, ixutywe kunye ne-emulsified. Itanki inezibonelelo zolwakhiwo lomntu, umthamo owenziwe ngokwezifiso, ukusebenza ngokulula, ukhuseleko kunye nococeko, kunye nokusebenza okuzinzileyo. Idibanisa ukucheba ngesantya esiphezulu, ukusasazeka, ukuhanjiswa kunye nokuxutywa.
Egqithileyo Umaleko wokudibanisa itanki eline-single kunye ne-propeller agitator
Okulandelayo: Umaleko owodwa wokuvalwa kwetanki
Isanti ephezulu yokucheba i-emulsification itanki yokuxuba
Umaleko owodwa wokucheba itanki lokuxuba
I-tank ephezulu yokucheba e-shear ephezulu
I-Emulsification yokuxuba iTanki
Ukuxutywa kwetanki yesiqhelo
Iselfowuni yokufudumeza umbane itanki
Itanki lokusasaza itanki lokusasaza umbane
Ubume bempompo yokufudumeza umphezulu
I-2000L itanki yokuxuba umaleko omnye